Mogadishu Journal » 2019 » July » 29
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo la kulmay Wafdi ka socda Ururka Iskaashiga Islaamka
Mjournal :-Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Danjire Axmed Ciise Cawad, ayaa maanta qaabilay wafdi ka socda Ururka Iskaashiga Islaamka oo uu hoggaaminayo Danjire Tarig Ali Bakheet oo ah Agaasimaha Guud ee Waaxda Arrimaha Siyaasadda ee Ururka oo shalay soo gaaray...
UN envoy highlights importance of building on Somaliland’s achievements
In meetings with Somaliland’s leadership today, the United Nations Secretary-General’s Special Representative highlighted the importance of building on Somaliland’s achievements as well as preparing for upcoming elections there. “Critical to that is finding ways of resolving...
Burundi oo sheegtay in 6 askari looga dilay Soomaaliya
Mjournal :-Ciidamada Burundi ayaa xaqiijiyay in lix askari looga dilay weerar gaadmo ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada Burundi ah oo marayay meel u dhow degmada Balcad. Afhayeenka ciiamada Burindi Col Floribert Biyereke ayaa VOA u xaqiijiyay weerarkan....
Madaxweynaha Somaliland Biixi oo cafis u fidiyay maxaabiis burcad badeed ah
Mjournal :-Madaxweynaha Maamullka Somaliland Muuse biixi Cabdi ayaa cafis u fidiyey maxaabiista laga soo wareejiyey dalka Seycheles kuwaasoo ku xukunaa xabsiyo kala duwan kadib markii lagu helay falal Burcad badeednimo ah . Maxaabiistan oo tiradoodu gaareyso 19 maxbuus ayaa ka...
Six African peacekeeping soldiers killed in Somalia
At least six soldiers from East African country of Burundi, were killed in an attack near Somali capital Mogadishu, an official said. The soldiers were part of the African Union Mission in Somalia (AMISOM). “Elements of the al-Shabaab terrorist group have attacked Burundian...
Weerar Madaafiic ah oo lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada Kenya
Mjournal :-Wararka laga helayo Gobolka Gedo ayaa waxaa ay sheegayaan in rag ka tirsan Al-Shabaab ay weerar madaafiic ah ku qaadeen saldhig Ciidamada Kenya oo ka mid ah AMISOM ku leeyihiin duleedka degmada Ceelwaaq ee gobolkaasi Gedo. Mas’uuliyin ka tirsan maamulka gobolka Gedo...
Puntland oo soo bandhigtay wax-yaabaha qarxa iyo Rag diyaarinayay
Mjournal :-Saraakiisha Ciidamada Ammaanka Dowlada Goboleedka Puntland ayaa Maanta waxaa ay Magalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari kusoo bandhigeen waxyabaha qarxa iyo rag ay sheegeen inay diyaarinayeen. Saraakiisha ayaa waxaa ay sheegeen in waxyaabaha qarxa iyo raga...
Mukhtaar Roobow oo xabsigiisa loo bedelayo xabsi guri
Mjournal :-Waxaa soo baxaya warar sheegaya in dowladda Soomaaliya ay qorsheyneyso in Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ku xiran xabsi ay maamushu NISA loo wareejinayo Xabsi guri, sida ay sheegayaan ilo wareedyo. Wararka ayaa sheegaya in muddooyinkan ay socdeen dadaalo la xiriira...
Go’aano kasoo baxay Taliska Millateriga Somalia ee Koonfur Galbeed
Mjournal :-Taliska Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee qeybta 60aad ayaa soo saaray digniin ku socota qaar ka mid ah Ergada soo dooratay Xildhibaannada Golaha Shacabka tas oo ku saabsan inaysan u hogagansami karin Amarkii dhawaan kasoo yeeray Al-Shabaab. Taliyaha Ciidamada...
Mareykanka oo faah faahiyay duqeyn uu ka fuliyay Gobolka Bari
Mjournal :-War-saxaafadeed ka soo baxay taliska Ciidamada Maraykanka ee qaarada Afrika ee loo yaqaano (AFRICOM) ayaa lagu faah faahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo uu Mareykanka ka fuliyey deegaano ka tirsan Gobolka Bari ee Maamulka Puntland. Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in...